Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Liver Blood Test အသဲအတွက် သွေးစစ်ခြင်း
Liver Blood Test အသဲအတွက် သွေးစစ်ခြင်း
Sun, Jan 27, 2013 at 8:42 PM
ကျွန်တော့် အသက်က ၃၁ ပြည့်ပြီးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်မှာ အသည်းရောင် B ပိုးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ဆေးစစ်တော့ တွေ့တာပါခင်ဗျာ။ ကုသမှုတော့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ မနှစ်ကမှ ဆရာကြီး (့) ကို စပြီး ပြခဲ့ပါတယ်။ 14 Dec 2011 မှာ သွေးစစ်တဲ့ အဖြေတွေက
1. HBV - DNA Test - 71
2. ALT - 70 (high)
3. AST - 32 (normal) ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကုသမှုမှာ LIVE UP, ZINCOVIT, LIVER (MILK THISTLE), RACIPER 20 (၄) မျိုး သောက်ဖို့ ညွှန်ကြားပြီး ၁ နှစ် ပြည့်ရင် ပြန်လာပြဖို့ ပြောပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျွန်တော် ၁ လ ပြည့်အောင် မသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ 25 Dec 2012 မှာ နောက်ထပ်တစ်ခေါက် ထပ်ပြပြီး နောက်တစ်ကြိမ် သွေးစစ်ပါတယ်။ အဖြေတွေက HBV DNA Test - Not detected, ALT 87 (high), AST 26 (normal) ဖြစ်ပါတယ်။
Ultrasound လည်း ရိုက်ကြည့်ပါတယ်။ Normal ပဲလို့ ပြောပါတယ်။ အရင်ဆေး ၄ မျိုးကိုပဲ သောက်ဖို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။ ALT မြင့်နေတဲ့အတွက် နောက် ၁ လမှာ သွေးပြန်စစ်ဖို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။ ဒီအကြိမ်မှာတော့ ဆေးကို မပျတ်မကွက် မှန်မှန်သောက်ပါတယ်။ မနေ့က ALT နဲ့ AST ကို ထပ်စစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ အဖြေလွှာမှာ ALT 86 (high) နဲ့ AST 43 (high) ဖြစ်သွားပါတယ်။ ALT & AST မြင့်နေတဲ့အတွက် အရမ်းစိတ်ပူမိပါတယ်။ ဆေးမှန်မှန် သောက်လိုက်တဲ့ ၁ လအတွင်းမှာ AST က ၂၆ ကနေ ၄၃ ဖြစ်လာလို့လည်း ပိုပြီး စိတ်ပူမိပါတယ်။ ဆေးသောက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာ ဆီးသွားရင်လည်း ဆီးဝါပါတယ်။ ဆေးမသောက်ရင် ဆီးမဝါပါဘူး။ ALT & AST က ဘယ်လိုအချိန်မှာ မြင့်တက်ပါလည်း။ B ပိုး မရှိတဲ့ သူတွေမှာရော ခုလို မြင့်တက်ပါလား။ စိတ်လည်း အရမ်းညစ်နေလို့ ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးပါ။ ဆရာရေးထားတဲ့ အသည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Blog Post တွေကိုလည်း ဖတ်ပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိပဲ ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ပါ။
Basic functions of the liver အသဲက ဘာတွေလုပ်ပေးသလဲ
• Detoxification of blood သွေးကိုအဆိပ်အတောက် ရှင်းပေးတယ်။
• Production of important clotting factor and other important proteins သွေးခဲစေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဓါတ် ထုတ်ပေးတယ်။ တခြားအရေးပါတဲ့ (ပရိုင်တင်း) တွေလဲ ထုတ်လုပ်ပေးတယ်။
• Metabolizing medications and nutrients အစာအာဟာရနဲ့ ဆေးတွေကို ဓါတ်ပြုပေးတယ်။
• Processing of waste products of hemoglobin သွေးနီဥထဲက (ဟီမိုဂလိုဘင်) ကို ပြုပြင်ပေးတယ်။
• Storing of vitamins, fat, cholesterol, and bile ဗီတာမင်တွေ၊ အဆီ၊ (ကိုလက်စထော) နဲ့ သည်းခြေရည်တွေကို သိုလှောင်ပေးထားတယ်။
• Production of glucose (ဂလူးကို့စ်) သကြားဓါတ်ထုတ်လုပ်ပေးတယ်။
Common liver blood tests အသဲအတွက် အများဆုံးလုပ်ရတဲ့ သွေးစစ်ခြင်းများ
အသဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ဘို့လုပ်ရတယ်။ အသဲမှာ Enzymes (အင်ဇိုင်းမ်) ဆိုတဲ့ (ပရိုတင်း) တွေရှိတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အသဲထဲက (ဆဲလ်) ထဲမှာသာ ရှိနေရတယ်။ အသဲရောဂါရလာရင် အဲဒါတွေက သွေးထဲကို ထွက်လာကြတယ်။ သွေးကိုစစ်လို့ အဲဒါတွေများနေ-မနေကိုစစ်တာဖြစ်တယ်။
အများဆုံး သုံးတဲ့နည်းဟာ အလွန်လဲတိကျတဲ့ Aminotransferases ဆိုတာတွေဖြစ်တယ်။ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Aspartate aminotransferase (AST or SGOT) နဲ့ Alanine aminotransferase (ALT or SGPT) တွေဖြစ်တယ်။ တခြားစမ်းမှာတွေကတော့ Alkaline phosphatase, 5' nucleotidase နဲ့ Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) စတာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
Aminotransferase ကို Transaminase လို့လဲခေါ်တယ်။ Aspartate aminotransferase (AST) ကို Serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) လို့လဲခေါ်တယ်။ Alanine aminotransferase (ALT) ကို Serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) လို့လဲခေါ်တယ်။ (AST = SGOT and ALT = SGPT) လို့အတိုသမှတ်သားနိုင်တယ်။
AST (SGOT) အင်ဇိုင်းမ်ဟာ အသဲထဲမှာ များများရှိပေမဲ့ နှလုံး၊ ကြွက်သား၊ ကျောက်ကပ်၊ ဦးနှောက်တွေထဲမှာလဲ ရှိနေတယ်။ ဒီအင်္ဂါတွေထိခိုက်မိရင် အဲဒီအင်ဇိုင်းက သွေးထဲရောက်လာတယ်။ သတိထားဘို့က AST နဲ့ ALT တွေ မြင့်တက်နေပေမဲ့ အသဲကကောင်းကောင်းအလုပ်နေနိုင်တာလဲရှိမယ်။
Liver function test (LFT) အသဲအလုပ်အတွက် သွေးစစ်တာထဲမှာ ဒါတွေပါမယ်။
• Coagulation panel (prothrombin time or PT, and international normalized ratio or INR) ဆိုတာက သွေးခဲနိုင်စွမ်းနဲ့ဆိုင်တာတွေဖြစ်တယ်။ မကောင်းရင် သွေးယိုတာဖြစ်မယ်။
• Albumin level (hypoalbuminemia) ဆိုတာက နည်းနေရင်မကောင်းဘူး။
• Bilirubin ဆိုတာက သွေးနီဥတွေပျက်စီးရာကနေထွက်တဲ့ဓါတ်ဖြစ်တယ်။ များနေတာမကောင်းဘူး။
• Platelet count သွေးမှုံအရေအတွက် နည်းနေတာလဲ မကောင်းဘူး။
ဒီ (အင်ဇိုင်းမ်) တွေများနေတာဟာ ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Mild to moderate elevations နည်းနည်းကနေ အသင့်အတင့်များနေတာမျိုး တွေ့ရတတ်တယ်။ ဥပမာ Fatty liver အသဲအဆီဖုံးနေတာမျိုး။ Diabetes mellitus ဆီးချို နဲ့ Obesity အဝလွန်သူတွေမှာလဲ များနေတတ်တယ်။
2. Chronic hepatitis B နာတာရှည် (ဘီ) ပိုးရှိနေသူတွေနဲ့ နာတာရှည် Hepatitis C ရှိနေသူတွေမှာလဲ နည်းနည်းကနေ အသင့်အတင့်များနေတယ်။
3. Chronic and acute alcohol ရက်တို-ရက်ရှည်အရက်နာတွေမှာလဲ များနေမယ်။
4. Some medications တချို့ဆေးတွေကြောင့် များနေနိုင်တယ်။
- အနာသက်သာဆေးတွေ (Aspirin, Acetaminophen, Ibuprofen, Naproxen, Naprelan, Anaprox, Aleve, Diclofenac နဲ့ Phenylbutazone (Butazolidine) ဆေးတွေ၊
- အတက်သက်သာဆေးတွေ (Phenytoin, Valproic acid, Carbamazepine နဲ့ Phenobarbital
- ပဋ္ဋိဇီဝဆေးတွေ (Tetracycline, Sulfonamides, Isoniazid, Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Nitrofurantoin, Fluconazole နဲ့ ဖန်းဂတ်စ် ဆေးတွေ၊
- ကိုလက်စထောကျဆေးတွေ (Lovastatin, Pravastatin, Atorvastatin, Fluvastatin, Rosuvastatin, simvastatin, Niacin ဆေးတွေ၊
- နှလုံးသွေးကြောဆေးတွေ (Amiodarone, Hydralazine, Quinidine ဆေးတွေ။
AST and ALT serum levels တွေမြင့်တက်နေတာဟာ ၁ဝ ဆကနေ အဆထောင်အထိရှိနိုင်တယ်။
• Acute viral hepatitis A or B ယုတ်တရက် (အေ) ပိုးနဲ့ (ဘီ) ပိုးဝင်ခံရသူတွေ၊
• Toxins အဆိပ်သင့်သလို အသဲထိခိုက်ခြင်းမျိုးဟာ Acetaminophen (Paracetamol/Tylenol) ပါရာစီတမော များလွန်းတာနဲ့ Mushroom poisoning မှိုဆိပ်သင့်တာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Shock (ရှော့ခ်) ရနေတာကြာရင်လဲ များနေမယ်။
• Severe muscle diseases ကြွက်သားတွေ ဆိုးတိုးဝါးဝါးထိခိုက်ခံရရင် များများမြင့်တက်နေမယ်။
• Hemachromatosis (iron overload), Wilson's disease, alpha-1-antitrypsin deficiency, Celiac disease, Crohn's disease, Ulcerative colitis, Autoimmune hepatitis တွေဖြစ်တယ်။
• Hepatitis C မှာက Hepatitis B ထက်ပိုတွေ့တယ်။ အသဲမှာ A, B, C အပြင် တခြားViral infections တွေကနေလဲ မြင့်တက်နေနိုင်တယ်။
• hepatocellular carcinoma or hepatoma အသဲကင်ဆာမှာတော့ တက်နေတာ ရြှးတယ်။
• alcoholic liver disease အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသဲရောဂါမှာ AST က 300 units/liter ထက်နည်းပြီး၊ ALT က 100 units/ liter ထက်နည်းနေတယ်။
AST (SGOT) နဲ့ ALT (SGPT) တွေကို တခါတည်းမဟုတ်ဘဲ ဆက်စစ်နေရတယ်။ ဒါမှ သက်သာလာသလား၊ တန်းနေသလား ဆိုးလာသလားသိမယ်။
• The normal AST (SGOT) =5to 40 units per liter of serum
• The normal ALT (SGPT) =7to 56 units per liter of serum
• Liver blood tests အသဲအခြေအနေ သိချင်ရင် သွေးစစ်ပါ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/liver-blood-tests.html